Publié mai 29, 2019 par Book News
Nilatsaka ny valin’ny ampamoaka nifanoheran’ny SOMACOU, orinasa malagasy mpamokatra bodofotsy sy lamba samihafa tamin’ny fikambanan’ireo sinoa mpampiditra bodofotsy eto amintsika tamin’ny volana lasa iny, ka nandresy isika Malagasy.
Nivoaka ary ny didim-pitondrana laharana 7094/MICA/MEF mikasika ny fandoavana ny haba fanampiny, ho an’ireo entana miditra eto Madagasikara mifaninana amin’ny vokatra misy eto. Araka io didy io dia ireo entana ampidirina eto ka misy mitovy amin’ny vokarin’ny orinasa Malagasy dia takiana haban-tseranana amin’ny tahany ambony kokoa. Singanina ao anatin’izany ny vovon-tsavony izay mandoa haba 39 %, ny paty fihinana 30 % ary ny bodofotsy 41 %. Ireo vokatra ireo dia efa nanaovana ampamoaka manokana ary mbola ho avy ny an’ny karazan’entana sasany.
Fandresen’ny orinasa Malagasy, fandresen’ny Malagasy tsivakivolo
Ny SOMACOU no voakasika manokana tamin’iny raharaha iny fa amiko, isika Malagasy rehetra no nandresy. Tsy tongatonga ho azy izao fa tao ireo nifofotra sy niady mafy mba hiarovana ny orinasa Malagasy. Tao ny SOMACOU aloha voalohany indrindra, izay tsy nanaiky lembenana. Teo ihany koa ny filohan’ny “Syndicat des Industries Malagasy” (SIM) Andriamatoa Fredy Rajaonera, izay nanohana hatramin’ny farany. Tsy adino ny “Autorité National des mesures correctives commerciales (ANMCC) tarihin’Andriamatoa Barthelemy, izay nitsara tsy nitanila.
Mendrika hankalazaina ny zavatra tahaka izao mba halain’ny hafa tahaka. Matetika manko ny zava-misy eto amintsika dia tahotra sy fanginana avy hatrany manoloana ny tsindrihazolena ataon’ny vahiny sasany. Vokatr’izany, lasa isika tompony indray no mangataka atiny. Tamin’ity indray mitoraka ity kosa dia sahy nijoro sy niray hina ny Malagasy manoloana ny fanjanahana ankolaka kasain’ny sasany hatao.
Logo du SIM cc : SIM
Adala izay tsy miaro ny azy
Ao anatin’ny fahalalahana ara-toekarena ny ankamaroan’ny firenena eran-tany amin’izao fotoana izao ary tsy afa-miala amin’izany isika Malagasy. Lasa kianja fiadiana ny fifanakalozana ara-barotra. Hany ka, toy ny akoholahy miady am-pasika, ny mpifanandrina, ka samy miaro ny masony tsy ho ditsoka. Toy ny androngo an-asa, ka samy miaro ny rambony tsy ho tapaka. Manoloana izany, adala izay minia tsy miaro ny azy.
Dingana lehibe io fampiakarana ny haban-tseranana io, nefa azo lazaina koa hoe sombiny ihany. Raha tsy isika Malagasy mihitsy manko no tonga saina ka manjifa ny vokatra vita eto amintsika aloha, dia ho zava-poana ihany ireny fepetra raisina ireny.
Nisy lahatsoratra niparitaka be izay tamin’ny taona 2016 mitondra ny lohateny hoe “fa nahoana ny Juif Ashkenaze no manan-karena indrindra?” Araka ny fanazavana tao dia ny firaisankina no antony lehibe indrindra. Ny azy ny firaisankina tsy eo imolotra fotsiny fa tena ampihariny amin’ny fiainana andavanandro. Porofon’izany 90 isan-jaton’ny volan’izy ireo dia mihodina ao amin’izy samy izy ihany. Izany hoe matetika raha mitady entana na mila tolotra isan-karazany ny Jiosy iray, dia amin’ireo mpiray fiaviana aminy ihany izy no mividy izany. Na eo an-tanindrazany na mila ravinahitra any an-tanin’olona izy ireo dia toy izany hatrany no fanaony, hany ka mandroso sy matanjaka ery ry zareo.
Misy mitsinjo ihany kay ny orinasa Malagasy! Nilatsaka ny valin’ny ampamoaka nifanoheran’ny SOMACOU, orinasa malagasy mpamokatra bodofotsy sy lamba samihafa tamin’ny fikambanan’ireo sinoa mpampiditra bodofotsy eto amintsika tamin’ny volana lasa iny, ka nandresy isika Malagasy. Ka hoy aho hoe, hadalana ny an’izay mamela ny hareny ho tantely afa-drakotra fa ny an’ny olona arovany toy ny anakandriamaso. Manentana hatrany ary aho amin’ny fanjifana ny vita Malagasy fa io no antoka mampandroso antsika sy reharehan’ny firenentsika.